AnTuTu က Sony H8266, Qualcomm Snapdragon 845 SoC နှင့် 4GB RAM ရှိတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်။ Androidsis
မကြာသေးမီက Sony Xperia XZ2 Pro အကြောင်းပြောမယ်ဒီလကုန်ဘာစီလိုနာမှာကျင်းပမယ့် MWC မှာပြသနိုင်မယ့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ဖုန်းတစ်လုံး။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ Sony H8266 နှင့်ပြုလုပ်မည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ထူးခြားချက်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအချို့ကို AnTuTu တွင်ပေါက်ကြားစေခဲ့သည်ထို့အပြင်၎င်းပြသမှုအရ၎င်းသည်အာရှကုမ္ပဏီကြီး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားလိမ့်မည်။
ဒီမော်ဒယ်နာမည်နောက်တစ်မျိုးပါလိမ့်မယ်။ Qualcomm Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည်, SoC သည်စုစုပေါင်းစွမ်းအားဖြင့်လက်ရှိစျေးကွက်ရှိအခြားသူများထက်သာလွန်သည်.
ကောင်းပြီ၊ ဤလူကြိုက်များသော Benchmark အရ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအမေရိကန် terminal Qualcomm မှပရိုဆက်ဆာတစ်ခုနှင့်အတူဒီ terminal ကိုတိုးမြှင့်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Snapdragon 845, နောက်ဆုံးပေါ် SoC ကုမ္ပဏီအကြောင်း high-end Android ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒီရှစ်ခုပရိုဆက်ဆာတွင် 75GHz clock frequency ၏တူညီသော Cortex-A2.8 အမျိုးအစားလေးခုနှင့် ၁.၈GHz ၏နောက်ထပ် Cortex-A55 သည်စွမ်းအင်ချွေတာရန်အခြေခံအကျဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်များသို့ညွှန်ကြားလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Adreno 630 တပ်ဆင်ထားပါသည် ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာနှင့် multimedia အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတောင်းဆိုရန်နှင့် 4GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၆၄ ဂရမ်ပါဝင်သည်။
Sony H8266 သယ်ဆောင်သောမျက်နှာပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ AnTuTu ၏အဆိုအရယခုအချိန်အထိလူသိများသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် FullHD + resolution 2.160 x 1.080 pixel resolution ဖြင့်ထွက်ရှိလာမည်, အရာက 18:9ရှုထောင့်အချိုး panel ကိုထောက်ခံထားကြောင်းထောက်ပြသည်။ ဒါ့အပြင်၎င်းပါ ၀ င်တဲ့ OS နဲ့ပါတ်သက်ပြီး၊ Android 8.0 Oreo ကိုအသုံးပြုထားသည်.
နောက်ဆုံးအနေနှင့်၎င်းသည်ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၏ Xperia မိသားစုတွင်ပါ ၀ င်မည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုယူဆောင်လာမည့်စီးပွားဖြစ်အမည်ကိုအသေအချာမသိရသေးသော်လည်း၊ အရာအားလုံးက Xperia XZ2 ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာအားလုံးပြသထားတယ်.
လည်း Mobile World Congress တွင်၎င်းကိုအခြားမျိုးကွဲများနှင့်ပြသနိုင်သည်ဟုကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်…ဒါတောင်မှကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤအရာအားလုံးကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့သာစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » AnTuTu က Sony H8266၊ Qualcomm Snapdragon 845 SoC နှင့် 4GB RAM ရှိတဲ့မိုဘိုင်း
Nokia 8 သည် Android 8.1 Oreo ကိုတရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်